युरोपमा शीर्ष 15 डे ट्रिप्स | सडकको लागि एक युगल
जुलाई 23, 2018 / एक टिप्पणी छोड
यूरोप एक महाद्वीप हो कि सबै केहि छ। ग्रीसको ग्रीसको छेउमा समुद्र तटहरू स्विस अल्प्सको बर्फ-प्रतिबन्धित आश्चर्य वा टास्कन क्षेत्रहरूको उत्सर्जन विस्तारमा, यूरोपले सबैलाई, कहीं र सबैलाई प्रदान गर्दछ। एक महान युरोप दिवस यात्रा हेर्नुहोस्, जहाँ तपाईं जहाँ रहनु भएको छ, चाहे जहाँ पनि तपाईं भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा धेरै बनाउनुहोस्!
जब एक यूरोपमा यात्रा, यो जाने निर्णय गर्न गाह्रो हुन सक्छ कि कहाँ जाने र बाहिर नचाहिने के गर्न के गर्न र सबै त्यहाँ हेर्न को लागी। सौभाग्य देखि, त्यहाँ हाम्रो अनधिकृत यात्रा को लागी विदेशमा अनगिनत समय प्रयोग गरिसकेको छ जसको कारणले हामीलाई अधिक हेर्न र कम समय मा अधिक गर्न अनुमति दिन्छ।
त्यहाँ एक दिन यात्राको तुलनामा कुनै छुट्टिको अनुभव अधिकतम गर्न को लागी कुनै राम्रो तरीका छैन। किन? दिन-यात्राहरूले तपाईंलाई कुनै पनि प्रमुख शहर भ्रमण गर्न समन्वयित, सस्ती मार्ग प्रदान गर्दछ जुन सुरक्षित, चिन्ता-मुक्त, र सुविधाजनक तरिकामा छिमेकी आकर्षण र शहरहरू समावेश गर्दछ। यति धेरै परिश्रम, सुन्दर महाद्वीपमा हेर्न को लागी, तर अरू युरोप तर तपाईं यात्राको यात्रा लिन चाहानुहुन्छ?
सच्चाई, छोटो बस ड्राइभ भित्र वा रेलमा फेला परेन जुन वास्तवमा युरोपमा कुनै महत्त्वपूर्ण शहर बाट रेल छ अझ बढी। हरेक लन्डनको लागि, त्यहाँ हेर्नको लागी एक Stonehenge हो। प्रत्येक म्यूनिखका लागि, त्यहाँ न्यूसेचवानस्टीन क्यासल हो जुन तपाईंलाई कल गर्दछ। यी स्टैंड-एक्लो आकर्षण प्रायजसो शहरहरूमा जहाँ तपाईं धेरै दिनको लागि भ्रमण गर्नुहुन्न, तर कम से कम एक प्रमुख आकर्षण हो कि पूर्ण अनिवार्य छ। यो जहाँ दिन-भ्रमणहरू खेलिरहेका हुन्छन्, राम्रो छुट्टीमा बदल्छन् ठूलो एक।
हामीले प्रत्येक पटक युरोप-यात्राको दिन-भ्रमणहरूको प्रयोग गरेका छौं, र हामीले यी सबै भन्दा सजिलो शहरबाट हामीले सरल र सस्ती यात्रा गरेका छौं। यो यात्राको गुणस्तर हो। एक शहर दुई, दुई देशहरूमा तीन र यति मा परिणत गर्नुहोस्। वास्तवमा, हामी योजना हाम्रो यात्राहरू जहाँ हामी दिन-यात्राहरू हाम्रो यात्रा कार्यक्रममा फिट गर्न सक्दछ जुन समझदार, सस्तो र मूल्यवान छ। दिन-यात्राहरूले हाम्रो यात्राहरू तिनीहरू के छन्, र हामी जान्दछौं कि तिनीहरू तपाईंको लागि त्यसै गर्दछन्!
यो गाइड यूरोपमा दिन-यात्राहरूको "ब्याकेट-सूची" दिनको लागि निर्माण गरिएको छ जुन तपाईं आफ्नै साथ प्रयोग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हामी शीर्ष 15 गिनती गर्दैछौं हामी तिनीहरूलाई स्थान दिनेछौं, छोटो वर्णन र सजिलो पछ्याउने लिङ्कहरू जहाँ तपाइँ रोजगारीको हाम्रो विक्रेताको माध्यमबाट आफ्नै दिन-यात्रा बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
Viator सबै भ्रमणहरूको लागि एक उत्कृष्ट छनौट हो, तर विशेष गरी दिन-यात्राहरू, किनभने यो सबै शहरमा प्रस्ताव गर्ने सबै भन्दा राम्रो कामको रूपमा काम गर्दछ। बस आफ्नो देश, तपाईले भ्रमण गरिरहनुभएको शहर चयन गर्नुहोस्, र Viator ले तपाईंलाई विस्तृत सूची प्रदान गर्दछ, मितिहरू, भाडा कार्यक्रम र सरल बुकिंग इन्जिनमा पहुँच प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले पुष्टि गर्नुपर्नेछ र मिनेट भित्र तपाईंको बाटोमा!
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले यो सँगै राख्नु भएको यो सूचीको आनन्द लिनुहोस्, तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हामी आशा गर्छौं कि यसले ल्याउँछ मूल्य तपाईंको अर्को छुट्टीमा तपाईँलाई! यो सूची प्रयोग गर्न, एक शहर छान्नुहोस्, उत्साह छान्नुहोस्, र आज संसारको धेरै हेर्नुहोस्!
लण्डनमा स्टोनहाङ्ग र बाथ
लन्डन एक बजेट शहर हो जुन दिनको यात्रा, धेरै बजेट र धेरै असाध्यै विकल्प, शहर र सजिलै संग यातायात को केहि घन्टा भित्र। सबै युरोपमा सबैभन्दा उत्कृष्ट दिन यात्राहरू लन्डनबाट पौष्टिक Stonehenge र स्नानमा उत्साह हो।
लन्डनको तीन घण्टा भन्दा कम, भ्रमणका वर्गीकरणहरू जुन स्थानहरूमा दुवै स्थान समावेश छन्, र तिनीहरू साँच्चिकै स्थानहरू आवश्यक छन्। स्टोनहाङको लागि रास्तेमा अंग्रेजी ग्रामीण इलाकाको मज्जा लिनुहोस् र मिथकमा, रहस्यमय र पुरातत्व स्नान, इङ्गल्याण्ड, 2,000 वर्ष पहिले भन्दा पूर्व रोमन गढ भन्दा बढी साइटमा जानु अघि युरोपको सबैभन्दा पुराना प्रागैतिहासिक स्मारकहरूको शक्ति।
बार्सिलोनालाई साल्भाडोर डाली संग्रहालय र क्याडाजहरू
यो छ को कला प्रेमीहरूको लागि उत्साह, र विशेष गरी साल्वाडोर डालीको कामको साथमा। बाट छोड्नुहोस् बार्सिलोना सुरू बिहान र टाउकोमा मूल फिगायर्सका डाली थियेटर-संग्रहालय, जोडाडाका डाली घर (पोर्ट ललिगेट संग्रहालय हाउस भनिन्छ) को नेतृत्व गर्नु अघि डेली आफैलाई परामर्श गरेर डिजाइन गरिएको थियो।
संग्रहालय साँच्चै आश्चर्यजनक छ, आधुनिक इतिहासको सबै भन्दा उदार भव्य र शानदार कलाकारहरूको दिमागमा एक झलक प्रदान गर्दछ। संग्रहालय साँच्चै दालीको इच्छामा रहन्छ, जसले भने, "म मेरो संग्रहालय एकमात्र ब्लक, एक भूलभुलैया, एक महान अतियथार्थवादी वस्तु चाहन्छु। यो पूर्णतया नाटकीय संग्रहालय हुनेछ। यो मान्छे जो हेर्न आउनु एक नाट्य सपना भएको अनुभूति संग छोड्छ। "आउनुहोस्, हेर्नुहोस् र सपना।
कडाकुहरु मा दाली घर को कलाकृति को एक कृति हो, गला दाली (साल्वाडोर को पत्नी) को लागि बनाइयो, र जसमा जो जोडी 50 मा गला को मृत्यु भन्दा पहिले 1982 भन्दा धेरै वर्ष को लागि रहयो थियो।
त्यहाँ सबै बजेट स्तरहरूको लागि क्षेत्रमा डली-प्रेरित यात्राहरू विभिन्न प्रकारका छन्, र सबैले पूर्वी स्पेनिस इलाकामा सुन्दर ड्राइभ समावेश गर्दछ।
रोम लाई नेपल्स र पम्पीआई
एक धेरै दिन को लागि आश्चर्य को अन्वेषण को लागि गुमाउन सक्छ रोम, तर छोटो ड्राइव दूर दुई प्रमुख ऐतिहासिक स्थलहरु छ जो मानव इतिहास को लागि महत्वपूर्ण छ रोम - नेपल्स र पोम्पेई को रूप मा।
नेपल्स, एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, एक सुन्दर, वास्तुशिल्प र अचम्मलाग्दो पियाज, साइट, महल र संग्रहालयहरु को साइट हो। थप कलात्मक नेपल्स व्यञ्जन छ, लामो समय पिज्जाको जन्मस्थानलाई मानिन्छ! एक गिलास रातो रक्सी संग एक नीपोलिटन मजा लिनुहोस् जब तपाईं शहर को केन्द्र मा एक सुन्दर कैफे देखि शहर को नजिकै हेर्नुहुन्छ!
पम्पेपी एक इतिहास-प्रेमीको आश्चर्यचकितता हो जुन मानव इतिहासको सबैभन्दा विनाशकारी प्राकृतिक आपदाहरू मध्ये एक साइट - 79 ई। मा माउन्ट विसेउयुस को विष्फोट यो खण्डहरू अनावश्यक सुन्दर र सज्जन हुन्छन्, वास्तविक जीवनको अनुस्मारक र परिवारमा हराएका छन्। त्रासदी 1100 भन्दा बढी पीडितहरू पत्ता लगाइएपछि, 100 भन्दा बढीमा घटनाको सम्मान र स्मरणमा गरिएको छ, जसमध्ये धेरै शहरमा देख्न सकिन्छ।
म्यूनिख देखि इन्सब्रक
वर्षको समयमा यस यात्रालाई बनाइएको छ, एक पहिले नै ठूलो यात्रा अविस्मरणीय हुन्छ। वर्षको आदर्श समय सेप्टेम्बरको अन्त्य हुन्छ, किनभने अस्ट्रियामा ओकेटोबरफेस्टको विद्युतीय वातावरणलाई अस्ट्रियामा छोटो अघि बढ्न सकिन्छ।
इन्सेब्रुक साँच्चै एउटा अचम्म छ - नर्डकेटटेको बीचमा र स्कियरको लागि मेक्का। त्यहाँ त्यहाँ, एक को मजा लिनुहोस् धेरै शहर पर्यटन इन्सब्रुक को भोजन, संगीत, जीवंत संस्कृति, र यूरोप को सबै भन्दा प्रिय र सुन्दर स्थानहरु मध्ये एक को आराम को वातावरण मा लिन्छ।
रिक्जेविक उत्तरी लाइट टूर
तपाईं आफैलाई रिक्जेविक (र राम्रो कारणको साथ) बाट टाढा टाढा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, तर रोशनीलाई तपाईंको गाइडलाई जंगलबाट टाढामा राख्न दिनुहोस्। रेजजेविक, एक निजी सपिलोनबाट तपाईंलाई र तपाईंको समूहलाई शहर बाहिर बाहिर तालिनेछ, उत्तरी लाइट्स को अनुभव गर्न को लागी, यो प्रभाव अरुण बोरेलिस भनिन्छ।
यो यात्रा अवधिमा छोटो छ, सायद चार घण्टा, तर फोटो विजेता र प्रकृति प्रेमीहरूको समान इष्टतम अवसर प्रदान गर्नेछ। मौसम अनुमति दिँदै, गाइडहरू साँच्चै जान्दछन् र तपाईंलाई जहाँ पनि आवश्यक प्रवेशको मूल्यको मूल्य बनाउनको लागी नेतृत्व गर्नेछ।
तथापि मौसमलाई फेर नदिनुहोस्, तथापि, अपरेटरले 100% रिफन्डहरू दिन्छ वा घटनामा पुनःस्थापित गर्ने स्काईहरूलाई सहयोग गर्दैन!
फ्लोरेंस र Tuscany वाइन चखने
फ्लोरेंस र टुस्कनी धेरै वाइन संग पर्याय छ, र तपाईं एक बनाउन बुद्धिमानी हुनेछ दिन यसको एक शिक्षित गाइडको सहयोगको साथ! यस टूरमा धेरै विकल्पहरू छन्, जो फ्लोरेंस र टास्कसिनी वाइन क्षेत्रमा पसेको छ। वरपर स्कटिङ गर्ने कि छैन Vespasभ्रमण गर्दै महलहरू or साइकल चलाउने खुला सडक तपाईंको विचार रोमान्स हो, यात्राहरूको यो वर्गीकरणले तपाईंलाई के गर्न आवश्यक छ।
निस्सन्देह, ट्युनियाँमा वाइन मात्र आनन्दित चीज होइन। केहि दुनिया को सबै भन्दा मान्यतापूर्ण पुनर्जागरण कला र वास्तुकला को होम, एक को एक विशाल सरणी संग्रहालय र सार्वजनिक basilicas को आनंद ले सकते हो जो महान कामहरु जस्तै Leaning Tower of Pisa, Duomo Basilica, and Uffizi Gallery।
डबलिन देखि क्लिफ मोर
डब्लिन एक धेरै अविश्वसनीय शहरमा धेरै तरिकाहरू छन्, तर यो केवल आयरल्याण्डको साँच्चै अनूठा बनाउँछ। डबलिनबाट दिन यात्रा, आयरल्याण्डको पूर्वी तटमा, पश्चिममा मोहरको चट्टानहरूमा जादुई दिनको लागि बनाइएको छ।
आयरल्यान्डको सुनको सुनको पहाडहरू पार गर्दै, यो यात्राले 3-4 घण्टा लिन्छ, काउन्टी क्लियरमा स्थित क्लिफहरूको लागि। एक पल्ट यहाँ, तपाईं क्लिफ को सुन्दरता र प्रतिभा द्वारा छोडिनेछ। यो आयरल्यान्डको सबैभन्दा उल्लेखनीय पर्यटन आकर्षण हो, प्रत्येक बर्ष एक लाख भन्दा बढि पर्यटकहरू आकर्षित गर्दै। त्यहाँ धेरैजसो विकल्पहरू छन्, चाहे बसोबास गर्ने जङ्गलको ऊँचामा हिँड्नु पर्छ किनकि समुद्रले 700 फुटको सामना गर्नु भन्दा अधिक छ वा मोर क्रूजको क्लिफ लिन सक्दछन्, जुन एक साधारण दिन यात्रा यात्रामा थपिएको छ। ।
एक देशको रूपमा सुन्दर र अङ्ग्रेजी रूपमा आयरल्याण्डको रूपमा, हामी अत्यधिक यो सकेसम्म धेरै देख्न सिफारिस गर्नुहोस्। मोर डेभलपमेन्टको क्लिफ सस्ती (जस्तै $ 40 प्रति व्यक्ति), सुन्दर र ब्लगरर्स, प्रकृति प्रेमीहरूको लागि उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ वा केवल पारंपरिक आयरिश ग्रामीण प्रेमीहरूको प्रेमी प्रदान गर्दछ।
Eurostar को माध्यम ले लन्डन देखि पेरिस
जब हामी यो लन्डन पेरिसमा पुग्यौं, यो दिन-यात्रा सजिलै रिवर्समा गर्न सकिन्छ। एकले फाइदा लिन सक्छ पुरा तरिकाले निर्देशित भ्रमण पेरिस को सीन को एक नदी क्रूज र प्रवेश लूवरे संग्रहालय मा पूरा भयो, या बस मा दौडने को माध्यम ले बस दौर को टिकट टिकट खरीद गरेर स्वतंत्र मार्ग को लागि चुन्नुहोस Eurostar.
यदि स्वतन्त्र यात्रा गर्दै, पेरिसको गारे डाउ नर्डबाट तपाईंको ट्राभल प्रिन्ट स्थापना भएको छ र प्रतीक्षामा भीडबाट टाढा राख्नको लागि। सहरमा दक्षिणतिर जानुहोस्, र सबै त्यहाँ अनुभव गर्नुहोस् - वर्लिस पैलेसबाट एफिल टावर सम्म!
लिस्बन देखि सिन्ट्रा र क्यासिसिस
लिस्बन र सबै पोर्चुगलहरू सुन्दर, तातो र अनुकूल छन्। हामीले यस सानो देशमा जनता र संस्कृति र मजाको धेरै ठाउँहरू पाउनुभएको छ - त्यसैले किन किन यो अधिक देखिएनन!
लिस्बनबाट, धेरै दिन-यात्रा प्रसाद छन्, तर हाम्रो मनपर्ने सातौं घण्टा सिन्ट्रा र क्यासिसिसको भ्रमण हो। कास्कीस लोकप्रिय समुद्र तटहरु जस्तै पश्चिम ग्वाओको बीचमा घिमिरे रहेको छ, र उत्तरशैली सिन्ट्रा पर्वतहरू उत्तरमा। यसको किनारेरीको धेरै सुन्दर, सुन्दर चट्टानहरू छन्, पर्यटकहरू आकर्षित गर्छन् जुन समुद्रको मनोरम दृश्यहरूका लागि आउँछन् र अन्य प्राकृतिक स्थलहरू जस्तै बोका डो इन्फरो।
ती रातो प्याकेजको खोजीमा कैसीसिसको एक लोकप्रिय गोल्फ गन्तव्यको रूपमा पनि फाइदा लिन सकिन्छ जुन नजिकका 10 गोल्फ कोर्सहरू मा। सर्फिंग, नौकायन, windsurfing, र kitesurfing अनुकूल मौसम, हावा, र समुद्र को स्थिति को कारण क्षेत्र मा पनि लोकप्रिय छन्।
म्यूनिख लिन्डहोर्भ र नेसेचवानस्टीन
जबकि म्यूनिख पहिले देखि नै सूचीबद्ध भएको छ, नेसेचवानस्टीन र लिन्डरहोफ को महलहरु लाई कि केवल वास्तुकला को प्रेमियों द्वारा देखे जान पर्छ।
जर्मनीको टाढाको दक्षिणपश्चिममा स्थित, नेसिचवानस्टीन र लिन्डहोरोले 19 मा महल बनाइएका छन्।th-सुरुले कि तिमी सुन्दरतामा पूर्णतया पकाउनु पर्छ। न्यूसेचवानस्टीन, एक कहानी, 1886 मा सम्पन्न पहाडको बासिन्दा निवासमा राजा लुडविग II द्वारा रिचर्ड वाग्नेररको घरको रूपमा काम गरिसकेको थियो, यसको अर्को विश्वव्यापी सुन्दरता र आकर्षण बनाइयो।
लिन्डहोफ, एक महान्, एक ही अवधि को शाही सम्पदा, केवल लुडविग को तीन सम्पदा को एकमात्र थियो जसलाई उनले खत्म गर्न को लागी बनाए। प्रत्येक को प्रतिरक्षा बस हिड्छ, र म्यूनिख देखि छोटो सवारी मा एक जरूरी रूपमा कार्य गर्दछ। यस उत्तेजना को टिकटहरु एक पूर्ण सौदा हो, को रूप मा साना देखि शुरू $ 60 प्रति व्यक्ति सबै दिनको घटनाका लागि।
एडिनबर्ग ले लच नेस, ग्लेन्कोई र हाइल्यान्ड्स
स्कटल्याण्डको मापनयोग्य इतिहास 12,000 वर्ष भन्दा बढि जान्छ, अझै पनि कोही कोही पनि पुरानो हुन्छ। Windswept को पूर्ण, रश परिदृश्य, एक आफैले एक ग्लासगो या एडिनबर्ग हेर्न को लागी एक विभेद गर्छ, तर यसको बाहेक त्यो के केहि प्रस्ताव को हेरौं।
लच नेस राक्षस को भूमि मा जानुहोस् र यो सास-यात्रा लिने ऐतिहासिक हाईल्याण्ड्स सम्म जारी राख्नुहोस्! यस उत्तेजनामा ​​मूल्य उत्कृष्ट छ, तपाईलाई साँचो दिनुहुन्छ 12 घण्टा यात्रा भोजन संग प्रतिमा $ 60 प्रति व्यक्ति को लागि स्कटिश स्प्रिंग संग मिलन शामिल थियो। पुरा तरिकाले निर्देशित, Urquhart कैसल मा स्थलों को आनंद र प्रतीत देखि अछूता परिदृश्य को अविश्वसनीय स्टर्कनेस मा रहयो।
त्यहाँ एडिनबर्ग र ग्लासगो बाहिर अतिरिक्त संकुलहरू छन् जुन तपाईँको कुनै पनि आवश्यक आवश्यकताहरू, बजेट र निजी दुवै उपयुक्त हुनेछ!
भियना देखि साल्जबर्ग
जबकि दुवै अस्ट्रिया मा हो, भियना र साल्जबर्ग धेरै फरक छ। जब तपाईं वियनामा हुनुहुन्छ, भियना सिम्फनीको स्वाद र क्रिसमस बजारको लापरवाह आनन्दको आनन्द लिनुहुन्छ, तपाईले साल्जबर्गको पर्वत विस्वासमा छोटो यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ।
शीर्ष स्कीइंग स्थानको रूपमा चिनिन्छ, साल्जबर्गको "ओल्ड टाउन" (Altstadt) यसको बार्को आर्किटेक्चरको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्ध छ र अल्पसंख्यक शहरको सबैभन्दा उत्तम संरक्षित शहर केन्द्र हो। यसको अतिरिक्त, साल्जबर्ग 18-शताब्दी को संगीतकार Wolfgang Amadeus मोजार्ट को जन्मस्थान थियो, र संगीत संगीत र फिलिम को स्थापना को ध्वनि को संगीत थियो।
संगीतको सुन्दरतामा हराएको मौसम, मौसम र अद्भुत Bavarian संस्कृति जसले साल्जबर्गलाई स्थानीय नाजुकहरू, ठूलो बियर नमूना गरेर प्रस्तुत गर्दछ र धेरैलाई आनन्दित पार्छ। निर्देशित भ्रमणहरू शहरको। Viator मा असंख्य प्याकेज विकल्पहरू छन्, एल्पाइन लेक सहित, वा साल्जबर्गको हप-ऑन हप अफ समावेश गर्दछ!
तेलिन डे-ट्रिप हेलसिंकी बाट
तालिन्न प्राय: युरोपमा युरोपमा मानिन्छ, तर यो मात्र आवश्यक छ। तेलिन, धेरै हेलसिंकी जस्तो, आफ्नो वास्तुकला र संस्कृति को माध्यम ले यसको रूसी इतिहास को अवशेष राख्छ।
दुवै सुन्दर, विचित्र र दुबै दुवै आकर्षण, तपाईं हेलसिंकीमा रहन बढी सम्भव हुनुहुन्छ तर छोटो बिना रिमाइन्ड हुनेछ। नौका-सवारी एस्टोनिया मा। टालिनको पुरानो टाउन युरोपको सबैभन्दा सुरक्षित मध्यकालीन शहर हो र युनेस्कोको विश्व विरासत स्थलको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ जुन एक प्रविधी ऊर्जा समावेश गर्दछ जुन ऊर्जा, उत्प्रेरित रात्रिभोज संग जोडिएको छ। आज, तालिन वार्षिक चार लाख भन्दा बढी पर्यटकको घर हो, र संख्या बढ्दै गयो!
यो परिवार-अनुकूल भ्रमणमा स्थानीय हिड्ने टूर, नौका र राउन्ड ट्रिप टोल र पूर्ण रूपमा निर्देशित अनुभव समावेश छ!
भेनिस देखि मुरानो र बुरोानो
भेनिस मुरानो र बुरोानो अवधि बिना जाने वेनिस छैन। वारोपेटी (वेनिस वेनिसहरूमा स्थानीय पानी टैक्सी सेवा) मा छोटो सवारी, मुरानो र बुरोानोले भेनिसमा कुनै पनि अनुभवलाई धेरै जोड दिन्छ।
मुरानो, यसको कांच बनाउने र कलात्मक अतीतको लागि प्रसिद्ध, वास्तवमा वेनिस ग्लासको रूपमा चिनिन्छ भन्ने घर हो। द्वीपमा धेरै भ्रमणहरू छन्, जसमध्ये धेरैहरू नि: शुल्क छन्, र सबैजना शैक्षिक र गवाह गर्न अविश्वसनीय छन्। यहाँ, जीवित गिलास निर्माताहरूले मुरानोको नामको सिर्जना गर्न खोजेको कुशलता देखाउँछन्।
बुरुानोको प्रसिद्धि - तहको आफ्नै कल छ। Lorgoon को उत्तरी अन्त मा Tortello को नजिकै स्थित, Burano को सुंदर, चमकदार रंगहरु को भवनहरु र नहरों संग घरों को फैल घर पनि छ। यो यी टापुहरूमा छ जहाँ हामीले केहि भन्दा राम्रो छौँ हाम्रो जीवनको भोजन, हामीलाई स्वीकार गरौं कि भेनिसको व्यञ्जन पनि यसको दक्षिणी दक्षिणी बहिनीको शहर हो!
भेनिसबाट, यी द्वीपहरूमा आधा दिनको यात्रा तपाईंको प्याकेजमा निर्भर गर्दछ, जुन $ 35 प्रति व्यक्तिको लागि सानो हुन सक्छ।
एथेंस डेल्फी को
युरोपमा सबैभन्दा राम्रो दिन-भ्रमणहरूको कुनै पनि उल्लेख ग्रीसमा ऐतिहासिक आश्चर्य समावेश गर्न अनिवार्य छ। एथेन्स, संसारको सबै भन्दा पुरानो शहरहरू र लगभग पाँच लाख पर्यटकहरूको घर, डेल्फीबाट मात्र दुई घण्टा मात्र छ।
ओरेकलका किंवदंतीको घर, डेल्फी अर्को युनेस्को विश्व विरासत स्थल हो जुन सरल रूपमा देखा पर्दछ। रोल्पा माउन्ट पेर्नसस को ठाँउ, डेल्सि थोलोस को साथ मास्क को घर शुद्ध भावना को अनुभव को लागी बनाइन्छ। एक समय पछि फर्केर आउँछ, कहिलेकाहीँ हाम्रो आधुनिक समाजको सुरुवात कहिलेकाहीं उपस्थित हुन सक्छ।
यद्यपि एथेन्सबाट उपलब्ध बहु-दिन यात्राहरू छन्, एकल-दिन साहसिकमा नि: शुल्क होटेल पिकअप, सबै स्थानहरूमा नि: शुल्क प्रवेश र ग्रीसको सुन्दर पहाडका सुन्दर दृश्यहरू समावेश छन्!
श्रेणी: अस्ट्रिया, इङ्गल्याण्ड, युरोप, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, समूह यात्रा, आइसल्याण्ड, आयरल्याण्ड, इटाली, पोर्चुगल, सडक यात्राहरू, स्पेन, स्विट्जरल्याण्ड, यात्रा सम्झौता, यात्रा योजना, संयुक्त राज्य टैग: स्नान गर्नुहोस्, cascais, दिन यात्रा, england, फ्लोरेंस, फ्रान्स, जर्मनी, आइसल्याण्ड, लिस्बन, लन्डन, उत्तरी रोशनी, पेरिस, रोम, stonehenge
← कुञ्जी बिस्क्ने: मियामीको सर्वश्रेष्ठ जिल्लाहरूको एक पर्यटक गाइड
12 प्रायः यात्रीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ यात्रा क्यान्सर →